Ra'isalwasaaraha oo booqdey Dekadana, lana wareegay deeq ka timid Imaaradka+Sawiro – SBC
Ra'isalwasaaraha oo booqdey Dekadana, lana wareegay deeq ka timid Imaaradka+Sawiro
Ma aha markii ugu horreysey ee ay dowladda Isu-tagga Imaaraadka Carabta ay mucaawano soo gaarsiiyaan shacabka soomaaliyeed, waxeyna markhaati ka tahay sida ay noo xasuusanayaan waqtiga aan ugu baahi badanahay. Waxaan u caddeyneynaa wallaalaheen UAE in mucaawanadii ay shacabka u keeneen si toos ah loo gaarsiin doono shacabka ugu baahida badan.
Ugu danbeyntii waxaan ka codsanayaa ganacsatada, iyo shacabka soomaaliyeed ee awooda inay gar-gaar bani’aadanimo u fidayaan wallaalahood soomaaliyeed ee u baahan gar-gaarka. Ummaddu waa inay isku tashadaan si looga maarmo kaalmada shisheeye. Somalida dhaqan ahaan waxaa lagu yaqaanay in ay is gar-gaaraan oo deriskooda ay ka warqabaan. Waxaa nagu soo fool leh bisha Ramadan oo nooga wada baahan inaan isu naxariisano, isla markaana isa saacidno. UNHCR waxey sheegeen in bishiiba 10,000 oo qaxooti ah ay gaarayaan xerada Dhadhaab ee Kenya, sidoo kale 5,000 – 6,000 oo qaxooti inay bil walba iska diiwaan gelinayaan xerada Doolow ee dalka Ethiopia.
Garaad Salaad Xasan
Agaasimaah Xafiiska Ra’isalwasaaraha